Muhiim 2019: Waa marki uu socday taxanaha Apple Watch 5 | Wararka IPhone
Muhiim 2019: Waa marki uu socday taxanaha Apple Watch 5
Waxaan ku sii wadaynaa muxaadarada 2019. Kadib markii aad na baraysay barnaamijka Apple Arcade iyo ipad-ka cusub ee 10,2-inji, waa marki Taxanaha Apple Watch 5.
Ka dib fiidiyow muujinaya astaamaha horay loo yaqaan ee Apple Watch, kiisaska dhabta ah ee dadka ka faa'iideystay saacadda, ama caawimaadda xaaladaha degdegga ah, dhicitaanka, isticmaalka qalabka korontada, iwm, waxay na tusayaan sida ay sidoo kale u caawiyaan kooxaha dadka, daraasadaha caafimaad ee kaladuwan ee ay sameynayaan, waxayna ugu baaqayaan milkiilayaasha Apple Watch inay iska diiwaangaliyaan cilmi baarista Apple ayna aruuriyaan xogtooda caafimaad si guud oo qaas ah si ay ugu sii wadaan mashaariicdooda, wadnaha, guurka caadada dumarka, iwm.
Hordhaca kadib, waxay kusii socdaan inay si dhab ah noo tusaan taxanaha cusub ee 5. Shaashad cusub: Had iyo jeer way daaran doontaa, iyada oo heerkeedu hooseeyo 1 Hz, haddii aad curcurkaaga u leexato ama aad taabatid shaashadda, waxay maraysaa ilaa 60 Hz. Waa shaashad cusub oo loo yaqaan LTPO. Waxay hubiyaan in ismaamulka saacadda uusan saameyn, isagoo la mid ah taxanaha hadda jira ee 4.
Waxay kaloo leedahay jajab, kaas oo lagu soo bandhigi doono shaashadda sida kombaasyada caadiga ah. Tani waxay ka dhigi doontaa barnaamijka Qariiradaha inuu ku tuso jihada aad u jeedo. Qalabka dahaadhka ee aan hore u ognahay, laba cusub ayaa lagu daray: Titanium iyo dhoobada. Midka koowaad ee cawl, iyo dhoobada oo ku dhex jirta caddaan cajiib ah.
Waxaa jira taxane cusub oo Nike ah, oo leh shaashado cusub iyo xarkaha isboortiga.
Waxay ku jiri doontaa labada nooc ee horay loo yaqaan, 5GTS iyo 5LTE. Kii ugu horreeyay oo keliya oo leh GPS, iyo tan labaad oo si buuxda uga madax bannaan iPhone-ka oo leh kaarka taleefanka eSIM ee casriga ah.
Kuwa ugu jaban ayaa noqon doona taxanaha 3 ee eSim la'aan $ 199, iyo kuwa ugu qaalisan taxanaha cusub ee 5 LTE ee 499. Horey waa loo iibsan karaa, waxayna bilaabi doonaan in loo adeego laga bilaabo Sebtember 20.
Kama aysan hadlin dhammaan wararka xanta ah ee soo ifbaxay ee ku saabsan la socodka hurdada. Waa inaanay weli diyaar u ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muhiim 2019: Waa marki uu socday taxanaha Apple Watch 5
Muhiim 2019: Wixii aan arag maanta